Posted by ညီလင်းသစ် au 5.11.12
I am your blog reader. That post is good one too.
ဓါတ်ပုံရဲ့ အလင်းအမှောင်ကို ကြိုက်တယ်ဗျ
ကစားပွဲလေး ကို မျှဝေခံစားရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး ကိုညီလင်းသစ် ရေ
ပြိုင်ဖက်ကိုဖတ်ရင်း ကိုယ်တိုင်ကစားနေသလို မျက်လုံးထဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်ယောက်နေတယ်။ အမှတ်ပေး စနစ်သစ်မှာ ဆားဗစ်ကိုပါ ရေတွက်တာဆိုတာလေး သိသွားတယ် တီတင့်တို့ ကစားစဉ်ကတော့ စံနစ်ဟောင်းလေးပေါ့။ အားကစားတိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ဟာ တစ်ဖက်သားအတွက် အခွင့်အရေးဖြစ်သွားနိုင်တာကို ဂရုပြုသင့်တာ အမှန်ပဲ မောင်ညီလင်းရေ။ စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းအောင် ရေးသွားနိုင်ပါပေတယ်။
အစ်ကို့ အစားမောပါမောသွားတယ်း)
ပြိုင်ပွဲထဲ ၀င်ပြိုင်လိုက်ရသလိုပဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါကလည်း တိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ့ စိတ်ခံစားမှု အနိမ့် အမြင့်ကော သက်လုံး အတွေ့အကြုံ ထိန်းချုပ်နိုင်မှု ဒါတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ လိုအပ်မှုတွေပါပဲ ရှုံးတာကို လက်ခံနိုင်သလို အနိုင်အတွက်လည်း ပီတိဖြစ်နိုင်ရမှာပေါ့ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်ကိုနိုင်တဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ် ဘရာဗိုး)
ပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ ကစားပွဲတစ်ခုကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်ကို... အဲဒီလို ခံစားချက်မျိုး ခံစားဖူးတယ်... ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဘော်လုံးအသင်း တစ်သင်းရှိတယ်... သူတို့ နဲ့ ကန်တိုင်း မခံချင်စိတ်နဲ့ အားထည့်ကစားဖြစ်တယ်... သူတို့ နဲ့ တွေ့ တိုင်းလဲ ကျွန်တော်တို့ အသင်းက ကောင်းကောင်းကန်နိုင်တယ်... မခိုမကပ်နဲ့ အားထည့်ကစားကြတယ်... ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း သူတို့ နဲ့ သူနိုင်လိုက် ကိုယ်နိုင်လိုက်ပါဘဲ... အဲဒီလို နိုင်တဲ့အနိုင်က တကယ်ကို ချိုမြိန်တယ်... တကယ်တော့ တကယ့်ပြိုင်ဘက်ကောင်းနဲ့ တွေ့ တဲ့အခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပိုးအားထုတ်ကစားရင်း ကိုယ့်အရည်အသွေးလဲ ပိုတက်လာတယ် ထင်တာပါဘဲ...
ကိုညီလင်းနဲ့အတူ ကြက်တောင်လိုက် ကစားနေရသလိုပဲ။ တောက်လျှောက် ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးပွဲ ... အသက်တောင်မရှူရဲဘူး ... နိုင်ပြီဆိုမှပဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ပြောရရင်တော့ ... စာတပုဒ်လုံးရဲ့ အနှစ်သာရကို ပေးစွမ်းတဲ့ အဆုံးသတ်ကလေးကိုတော့ သဘောအကျဆုံးပါပဲ ... ။
သရုပ်ဖော်အရေးအသားတွေ သွက်လက်ရဲတင်းတယ်ဗျာ. သဘောကျတယ်. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဝင်ရောက်ကစားနေရသလို ရင်တမမနဲ့၊ ကစားနေရင်း ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန်ထိန်းဖို့ သတိပေးနေချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ စိတ်ကိုပါ လိုက်စောင့်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်.
ကောင်းတဲ့အက်ဆေးလေးလို့ ချီးကျူးရုံမည်ကာမတ္တနဲ့ မလုံလောက်နိုင်တဲ့ အက်ဆေးကောင်းလေးပါပဲ ဘရို..
ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း အနုပညာပီပြင်စွာ စာဖွဲ့နိုင်ခြင်းကိုလည်း.. ချီးကျူးမိး))
မောတောင်မောတယ် ..ဖတ်ရင်း အနော်သာဆို လျှာအတစ်လိုက်ထွက်နေမယ်ထင်တယ် ဟိဟိ
ကစားနေပုံလေးတွေကို ရေးနေရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် အစဆွဲလိုက်တဲ့ စကားစုလေးတွေကို ကြိုက်တယ်အကို။
သွားတဲ့ မတ်စေ့လေးကလည်း တကယ်ကောင်းတယ်...။
ခံစားမှုမျိုးက သိပ်ကိုချိုမြိန်လှရဲ့....၊ကိုယ့်ကို ကိုယ်လည်း
ကစားပုံရေးထားတာ အသေးစိပ်တော့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်နေရသလိုပါပဲ
အင်း .. ကြက်တောင် ရိုက်နေတုန်းကများ စာရေးဖို့ စာစီနေသလား .. :P
တကွက်ချင်း ပြန်ရေးနိုင်လို့ ... :)
မနက်ကတည်းက တွေ့ တွေ့ ချင်းပဲ ဖတ်ထားပြီးပြီ ..ခုမှ comment ကို အေးဆေးလာရေးတာ.......။ စာမဖတ်ရသေးခင်ကတည်းက ဓါတ်ပုံနဲ့ တင်ကိုပဲ အားလုံးကို အနိုင်ရပြီးသားပါ..... ;)
စာဖတ်လိုက်တော့ စာဖတ်သူတွေအားလုံးကို ကြက်တောင်ပွဲတစ်ပွဲ ပေးကြည့်ထားပြန်တယ်....စိတ်လှုပ်ရှားမှု ..တွေနဲ့ လေ........။ ကိုယ်တိုင်အပျော်သက်သက် သူကောက် ကိုယ်ကောက် ကြက်တောင်မျိုးရိုက်ဖူးပေမယ့် ...ကြက်တောင်ပွဲကြည့်ရမှာတော့ ပျင်းခဲ့ ဖူးတာ ပြန်ပြင်လိုက်ရတော့မယ်ထင်တယ်...။ :D :D ကိုယ်တိုင် ပွဲတစ်ခု ဘေးကနေထိုင်ကြည့်ရသလိုမျိုး အစအဆုံး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်.......။ ဟုတ်တယ်နော်......အရေးကြီးပြီဆိုရင် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး မမှားသင့်တဲ့ အမှားတွေ လုပ်ပစ်တတ်ကြတယ်.....။ စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ လူက အမြဲ သာသွားတာပါပဲ.......။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အမြဲ သတိပေးနေရတဲ့ အချက်လေးပါပဲ.......။။ BTW ...ဒီခုနောက်ပိုင်း အသစ် အသစ်လို့ တောင် လာမအော်ရတော့ဘူးနော်..... :D :D :D
လာလည်တာ ကျေးဇူး အစ်မရေ...၊
တီတင့်က အမှတ်ပေး စနစ်ဟောင်းနဲ့ စကားခဲ့ဖူးသူကိုး...၊ ကျနော်တို့ တစ်ပွဲလောက် လုပ်လိုက်ရအောင်လေ...နော၊း)
ညီ့ရဲ့ ကွန်မန့်လေး သဘောကျတယ်၊ ပြုံးချင်စရာလေးလည်း ပါသလို မျှမျှတတ၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့...၊း) ကျေးဇူးညီရေ...၊
ပြိုင်ဖက်ကောင်းကို အမှီလိုက်ကစားရင်း ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အသွေးလည်း တက်လာတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်လေး သဘောကျတယ်ဗျ၊ တွေးစရာလေးပါတဲ့ ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ..၊
ဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ကစားတဲ့ဆီကို မမေကို တစ်ခါလောက် ဖိတ်ဦးမှပါပဲ..၊း) အမှန်အကန် အားပေးမယ့် ပရိတ်သတ်ကောင်း တစ်ယောက်ရမှာ သေချာတယ်...၊း))
သွက်လက်ရဲတင်းတဲ့ သရုပ်ဖော် အရေးအသားတွေအတွက် စူးရှထက်မြက်တဲ့ ကွန်မန့်ကို ချန်ခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါပဲ ဘရို...၊း)
ဓါတ်ပုံလေး ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် မလေးရေ..၊
ကျနော်လည်း စ,ကစားတုန်းက တကယ့်ကို လျှာအတစ်လိုက် ထွက်ခဲ့တာဗျ၊ အဟုတ်ပြောတာ..၊း)
အမြဲတမ်းသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလို့ ကတော့ဗျာ...ဟင်းဟင်း...၊ ဘာပြောကောင်းမလဲ..၊း)
Throwing two birds with one stone လေ..၊ အဟဲ.. မပိုင်လား၊း)
ညီမက သတိလေးကပ်ပြီး ဖတ်သွားခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ၊း) ကျေးဇူးပါနော်...၊
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ 'ငါလုပ်နိုင်တယ်' ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုမျိုး ရသွားဖို့က အရေးကြီးတယ် ထင်တာပဲ၊ အဲဒါကြောင့် ကြည့်ပါလား၊ အိုဘားမားတောင် 'Yes, we can..' နဲ့ မဲတွေကို သိမ်းကြုံး ယူသွားတာ လေးနှစ်တောင် ပြည့်ပါရောလား...၊း)
အဲဒီလို ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ၊ ကစားရင်းတန်းလန်း ဒီအကွက်လေးတော့ ပို့စ်မှာ ထည့်ရေးဦးမှလို့ စိတ်ကူးပေါ်လာရင် ကစားဖော်တွေကို time out တောင်းပြီး ဘေးမှာချထားတဲ့ စာရွက်ပေါ်မှာ တခါတည်း ကောက်မှတ်ခဲ့ရတာဗျ..၊း)
ဓါတ်ပုံလေးကို လှလှပပ ချီးကျူးသွားလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ၊း) ကြက်တောင်ပွဲ ကြည့်ရတာ ညီမ မပြောနဲ့၊ ကျနော်လည်း ပျင်းတယ်ဗျ၊ အကြာကြီး မကြည့်ချင်ဘူး၊ အင်း..အသစ်တင်ပါ လို့ အော်ချင်သူတွေ အော်လို့ရအောင် သုံးပတ်လောက် ပို့စ်မတင်ဘဲ ထားရင်ကောင်းမလားပဲ၊း) ဒုတိယ အကြိမ်ပြန်လာပြီး ပေးခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမရေ...။
I like "team spirit".
That is the main altitude I am looking for now. :) love to read this post. hope to transfer this thinking to my team work.
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းဝင်းကစားကွင်းထဲမှာ အပျော်တမ်းကစားခဲ့ဖူးတာကိုအမှတ်ရမိသွားတယ်...။ ကိုညီလင်းနောက်ဆုံးပိုဒ်မှာပေးသွားတဲ့ စိတ်ခွန်အားလေးကို ခံစားမျှဝေသွားပါတယ်...။
ပုံလေးလှတာကိုတော့ အထူးမပြောတော့ဘူး ကိုညီလင်းလက်ရာကိုသိပြီးသားလေ..။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကစားနေရသလိုပဲ ဒကာတော် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး ဟိုးအရင်က မီးပူပုံလေးကို သွားအမှတ်ရတယ်။
I would like to share on my face book because nowadays our country needs team spirit. I hope your message will give something to our people.
ကြက်တောင်ရိုက်တာကို စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင် ရေးတတ်လိုက်တာ။
တစ်ကြောင်းမှ မလွတ်အောင် သေချာဖတ်နေမိတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဝင်ရိုက်နေတယ်လို့တောင် ခံစားမိတယ်။
စာရော ဓာတ်ပုံရော သဘောကျလိုက်တာ။
အစ်ကိုဆီစာလာဖတ်တိုင်း...မှတ်သားစရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့စွဲကျန်မြဲပဲ...။ ကစားပွဲတစ်ခုပေမယ့် သေချာတွေးရင်တော့ မြှုပ်ကွက်တွေများကြီးနော...။
စိတ်သာလျှင်အဓိကဆိုသလိုဘဲ....ကစားပွဲမှအနိုင်ရဖို့စိတ်ခွန်းအားကအရေးပါသလို...ရှုံးခဲ့ရင်လည်းစိတ်ထားတတ်ရင် သိပ်မခံစားရဘူးပေါ့..။ ဓာတ်ပုံကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ...။
ဘတ်တံပါ လက်ထဲကအရှိန်နဲ့လွင့်သွားရော :p
အက်ဆေးကလေးကို နှစ်သက်လို့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာဖတ်သွားတာပါ။
ဂျွန်မိုးအိမ်၊ မမိုးငွေ့၊ မိုးနတ်ကြယ်စင်၊ ဘုန်းဘုန်းတောက်၊ Regular reader, မချော၊ ကိုဖြိုး၊ ညီမblackroze နဲ့ မမြတ်ပန်းနွယ်...
ကွန်မန့်လေးတွေအတွက် အယောက်စီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...။
တစ်ကယ်ပဲ ကိုယ်တိုင် ကစားနေရသလိုပဲ အကို...
ပြိုင်ပွဲကို အသေအချာ ထိုင်ကြည့်ရသလိုပဲ..